Queen's University Belfast - Fianarana in United Kingdom
Ny University Queen Belfast
Ny University Queen Belfast Details
fanafohezan-teny : STARS
Aza adino ny miresaka momba ny University Queen Belfast
Misoratra anarana ao amin'ny Queen ny University Belfast
Tia mianatra ianao ao amin'ny Queen ny. Ny University Mitambatra ny manan-karena manan-tantara lova amin'ny trano maoderina. fotsiny 15 minitra mandeha avy any Belfast afovoan-tanàna, ianao tsy ho lavitra ny fon'ny ny hetsika.
Inona ny nofy asa? Ny University ny mari-pahaizana fandaharan'asa dia natao mba hanomanana anao noho ny hoavy asa. Te ho lasa mpanao mari-trano, injeniera na ny dokotera? Na inona na inona tianao ny ho, misy tonga lafatra ambaratonga miandry anao ny maka ny dingana voalohany.
Tsy azo antoka izay te-ho mbola? Aza manahy. Ianao hanana fahafahana hahazo traikefa amin'ny asa maro ny hàdiny. Izany dia manome tombony anao ny fifaninanana. ary, rehefa vonona ny diplaoma? Ny University Service ny Careers afaka manome anao tari-dalana manokana eo amin'ny dingana manaraka.
Faculty ny Medicine, fahasalamana & fiainana Sciences
Pambolena Teknolojia amin'ny Professional Fianarana
Mpikaroka amin'ny Professional Fianarana
Biolojika Siansa amin'ny Professional Fianarana
Food Quality, Fiarovana sy Nutrition amin'ny Professional Fianarana
Ny fampiasana ny tany sy ny fitantanana ny tontolo iainana amin'ny Professional Fianarana
Haiaina an-dranomasina miaraka amin'ny Professional Fianarana
Ny zavamiaina bitika amin'ny Professional Fianarana
Nursing (Adult – Septambra fihinanana)
Nursing (Ho An'ny Ankizy)
Nursing (mianatra Disability)
Nursing (Fahasalamana ara-tsaina)
Haibiby amin'ny Professional Fianarana
Energy, Tontolo iainana sy maharitra
Food Siansa sy Food Security amin'ny Professional Fianarana
Faculty ny Arts, Humanities & Social Sciences
Heloka bevava sy ny bola ary
Actuarial Siansa sy doza Management
Ny fitantanam-bola amin'ny taona in Industry
International Business amin'ny teny frantsay
International Business amin'ny alemaina
International Business amin'ny sinoa
International Business amin'ny portogey
International Business amin'ny teny espaniola
Mozika Teknolojia sy Sonic Arts
Faculty of Engineering sy ara-batana Siansa
Herinaratra sy ny Electronic Engineering
Software sy ny Electronic Systems Engineering
Matematika sy Fizika Applied
Arkeolojia-Palaeoecology sy Géographie
Planning, Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana
Ny tontolo iainana sy ny Civil Engineering
Ara-drafitra Engineering amin'ny Architecture
Ny University Queen Belfast manana ny fakany ao amin'ny Belfast Academical Institution, izay naorina tamin'ny 1810, iray amin'ireo Fanjakana ny 10 anjerimanontolo tranainy indrindra, ary mitoetra toy ny Royal Belfast Academical Institution. Ny ankehitriny oniversite voalohany nanofa ho “Queen ny College, Belfast” in 1845, izany rehefa miaraka amin'ny niara-nanangana ny Queen College, Cork, ary ny Queen College, Galway, izay tafiditra ny nataon'ny vadin'ny mpanjaka University of Irlandy - nanangana hampahery fianarana ambony ho an'ny Katolika sy ny Presbiteriana, toy ny Andriamanitra telo izay iray mitovy ho College, Dublin, Ary dia nisy andrim-panjakana Anglikana. Queen ny College, Belfast, nisokatra in 1849. Ny trano lehibe, ny Lanyon Building, Noforonin'Andriamanitra ny mpanao mari-trano amin'ny teny anglisy, Sir Charles Lanyon. Tamin'ny ny vozony, nisy 23 mpampianatra ary 343 mpianatra. Misy mpianatra tany am-boalohany ao amin'ny Queen ny University Belfast naka University of London fanadinana.
The Irlandey Anjerimanontolo Act, 1908 levona ny Royal University of Irlandy, izay nisolo ny Queen ny University of Irlandy in 1879, ary namorona anjerimanontolo roa samy hafa: ny amin'izao fotoana izao National University of Irlandy sy Queen ny University of Belfast.
On 20 Jona 2006 ny oniversite dia nanambara ny £ 259 tapitrisa fandaharana fampiasam-bola mifantoka amin'ny foto-drafitrasa, fandraisana mpiasa sy ny fikarohana. Ny iray amin'ireo fampiasam-bola vokatra ity no vaovao oniversite fitehirizam-boky; famakiam-boky ny McClay Noforonin'Andriamanitra ny mpanao mari-trano Boston-monina Sheply, Bulfinch, Richardson & Abbott, miasa miaraka amin'ny Belfast mpanao mari-trano, Robinson Patterson Partnership, ary nisokatra tamin'ny Jolay 2009. Ny atao hoe trano dia ho fanomezam-boninahitra an'i Sir Allen McClay, lehibe mpanao soa ny Queen ny Oniversiten'i sy ny Library.
Tamin'ny Jona 2010, ny oniversite izy ireo nanambara fa ho fandefasana ny £ 7.5m Ansin fikarohana iraisam-pirenena amin'ny foiben'ny Seagate Technologies.
Queen ny dia iray amin'ireo mpampiasa lehibe indrindra tany Irlandy Avaratra, miaraka amin'ny mpiasa tanteraka ny 3,903, izay 2,414 ireo mpikambana ao amin'ny akademika, akademika-mifandray sy ny mpiasa sy ny fikarohana 1,489 ireo mpiasa-panjakana.
Ianao ve mila miresaka momba ny University Queen Belfast ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Ny University Queen Belfast amin'ny Map
Photos: Ny University Queen Belfast ofisialy Facebook
Ny University Queen Belfast Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Queen ny University Belfast.